Izinguquko zabadayisi bomshado
Uma into iyonke, ingafakwa noma nini, nganoma yisiphi isibalo futhi nganoma iziphi izizathu. Yilolu shintsho lwe-cut cut yinto ethandwa kakhulu emashumini ambalwa embalwa ngokulandelana.
Izingubo zokuguqula izingubo zazo zonke izikhathi
Isibonelo, ugqoke izinguquko zabagogo abashadile bahle ngoba, uma bewuhlobo olufanayo, isivakashi ngasinye singashintsha izingubo zabo ngezindlela ezahlukene, ngokususa noma ukufaka imininingwane, ukufaka amahlombe ehlombe emahlombe, ukubopha ibhande phambili noma ukushiya ngemuva.
Labo abafuna ukufihla amasentimitha engeziwe, abakhiqizi banikela ukugqoka izingubo zokuguqula amantombazane aphelele, bevumela ukuthi bangagxila ezinqunqutheleni zesibalo ngenxa yokukhwabanisa okulungile noma isitayela esifanelekile.
Kwabesifazane abasesimweni esithakazelisayo, kodwa ngesikhathi esifanayo besifisa ukubonakala bekhangayo emcimbini wemikhosi, izingubo ezikhethekile kwabesifazane abakhulelwe, okwenzelwe ngokukhethekile lezi zibalo ezikhethekile, ngokuqinisekile zizofanela.
Yini engagqoka izinguquko?
Ukugqoka kwakusihlwa kwabesifazane abashadile beTransformers bahlaba umxhwele ngezilinganiso zomcabango womklami, inhlanganisela yembala kanye namakhono okusebenza. Ngolunye ubusuku, ungakha izithombe eziningana, ngenkathi kuphela into eyodwa ngesikhathi.
Izinhlobo zokugqoka izinguquko zithathwa ngokuthi yizinguquko:
phezulu: izibopho ezingafakwa kuphela emahlombe, kodwa nasentanyeni, uwele ngemuva, wehla;
maphakathi: ibhande lingaboshwa phambili, ngemuva, liwehliswe njengemininingwane ephumelelayo, futhi uma lingekho, khona-ke kungahle kube nokufakwa okuhlukile, ama-patches, ukugcwalisa isithombe sonke uma kufunwa;
ngezansi: ingubo ingaba yinde, i-accordion ephindiwe, edala ama-crease amahle noma okufana nepakethe.
Ngokuvamile kuvamile ukuguqulwa komshini wokuguqula izingubo nemislee, ukuhlukahluka okungahlukahluka kuma-hoods wendabuko kuya kwezintathu ezine, ukuphela (uma kunikezwe ukuma) ngokuqedela okuphelele.
Yiqiniso, ethandwa kakhulu kwendwangu igqoka i-transformer kusuka kuma-knitwear. Abagcini nje ngokugqoka kahle futhi bakhuthaze, kodwa bawuthatha kalula ifomu elifunayo futhi baqaphele yonke imibono engacabangeki nengacabangeki.
UVictoria Spirina - izingubo zomshado
Izigqoko zomshado ezithandekayo ze-tulle
Izingubo zomshado zangempela
Umshado omfushane omfushane nge-lace
Izitayela zekhanda nezimbali
Izitayela ze-Wedding 2014
Cape ukuze umakoti ekwindla
Izikhwama zomshado zamasongo
Izitayela ezinhle kakhulu zomshado
Izindandatho eziningi zokuzibandakanya
Umdwebo we-Boudoir womlobokazi
Ukudla kwezinhlobo ezinkulu zezinja
Amaconsi afudumele abesifazane - ajwayelekile kanye nemidlalo, ubusika ebunini kanye ne-sintepon
Nini ukwethula ukudla okuhambisanayo nokudla okuxutshwe?
Ukuqhuma emlonyeni wesibeletho
Indlela yokulungisa izandla zakho ebusika ebusika?
Izitsha ezivela elayisi - zokupheka
Ikati inzalo yiphi ubudala?
Indlela yokusakaza i-gooseberries?
I-Ambidextr - izinzuzo nezindleko ze-ambidextory
Indlela ongayithola ngayo kwi-inthanethi - izinhlobo ezingu-10 ezaziwa kakhulu zemiholo
12 izibuko ezimbi kakhulu
Indlela yokukhipha iklabishi epanini lokuthosa?
Amber Hurd asekelwa abancane ngokocansi emhlanganweni "Ukuziqhenya Nokucwasa"
Ungamisa kanjani isikhumba sombuso ekhaya?
Itiye elihlaza ebusweni